Duuliyihii Waalnaa ee Gantaal uu gurigiisa ku sameystay intuu dhex galay cirka u duulay kaddibna uu la soo dhacay
Mogadishu - 01:21:56
Sunday February 23, 2020 - 22:17:37 in Wararka by Super Admin
Duuliye hore oo Mareykan ah ayaa ku geeriyooday saxaraha California kaddib markii uu la soo dhacay dayax Seyruuq ama Gantaal uu isagu gurigiisa ku soo sameystay.
Warbixinno laga sii daayay telefishinnada Mareykanka ayaa waxaa laga sii daayay Ninkan waalan ee 64-jirka ahaa oo lagu magacaabi jiray ‘Mad Mike Hughes’ isagoo Gantaal uu saaran yahay uu cirka intuu galo dhulka ku soo dhacayo.
Mike Hughes ayaa ku qanacsanaa in dhulku uu yahay mid fidsan oo uusan ahayn mid sida kubbad oo kale u wareegsan, waxaana howsha gantaal sameynta ka caawin jiray saaxiibadiis, waxaana uu ku rajo weynaa in uu kummanaan kun dhulka ka sare maro, kaddibna uu eego bal inuu yahay mid fidsan iyo mid wareegsan.
Waxaa la xaqiijiyay Mike in uu isku daygaasi ku geeriyooday markii uu saxaraha kula soo dhafay gantaalkii uu saarnaa oo farsameyntiisa ay uga baxday 18,000 oo dollar, kaas oo uu ku sameeyay gurigiisa.
Isku dayo hore oo uu sameeyay ayuu Mike ku guuleystay, taasoo ay ka mid ahayd bishii Maarso markii uu intuu Seyruuqiisii 570 mitir intuu u baxay dhulka ku soo degay isagoo kaashanaya Baarashuud, waxaana soo gaaray dhaawac fudud oo dhabarka ah.